चीन लक्षित ए’यरबेसमा भारतले बढायो लडा’कु वि’मान र हेलिक’प्टरको तै’नाथी…हेर्नुहोस् । – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
चीन लक्षित ए’यरबेसमा भारतले बढायो लडा’कु वि’मान र हेलिक’प्टरको तै’नाथी…हेर्नुहोस् ।
एजेन्सी : सोमबार चिनियाँ फौ’जसँगको सै’न्य झ’डपमा २० सै’निक गु’माएको भारतले चीनसँग नजिक पर्ने एय’रबेसमा आफ्ना लडा’कु विमा’न र हेलि’कप्टरहरूको तै’नाथी बढाएको छ।
यसैगरी उसले बं_गालको खा’डी क्षे’त्रमा थप यु’द्धपोतहरू पठाएको समाचार टा’इम्स अफ इ’ण्डियाले प्रका’शित गरेको छ। टाइम्स अफ इ’ण्डियाका अनुसार ल’डाकु वि’मानको तै’नाथी बढाएर भारतले बेइ’जिङलाई नयाँ दिल्ली जा’री सी’मा त’नाव ब’ढ्दै गएमा हुनसक्ने सम्भा’वित भिड’न्तका लागि तयार रहेको सं’केत दिएको छ।
भारतले ती क्षे’त्रमा आ’कासबाट जमि’नमा रहेका ट्यां’कमा रके’ट र मिसायलले ह’मला गर्नेसक्ने अ’पाचे हे’लिकप्टर, उ’च्च उ’चाइमा भा’री वजन उठाउन तथा सै’निक ओ’सार्न स’क्षम चि’नोक हेलिक’प्टरहरूको सं’ख्या बढाएको छ।
चीनले नियो’जितरूपमा हाम्रा २० सै’निक जवा’नलाई हिंस्र’करूपले मा’रेर सी’मा ना’घी सकेको छ। हामी कुनै पनि प्रका’रको प्रति’कारको लागि तयार छौं। आवश्यक सबै क’दम उठाइनेछ’, टाइ’म्स अफ इण्डि’यासँग एक उ’च्च भार’तीय सै’निक अधि’कारीले भने।
टाइम्स अफ इण्डि’याले चीन अझै पनि भिड’न्तको सो’चमा रहेको र सी’माक्षे’त्रमा उसले कि’ल्ला’बन्दी गरिरहेको आफ्नो समाचारमा उल्ले’ख गरेको छ। चिनियाँ जनमु’क्ति से’नाले गल्वान उ’पत्यकामा रहेको पाङ’गोङ तालको उत्त’री कि’नारामा दर्ज’नबढी सै’न्य कि’ल्लाको नि’र्माण गरेको सो समाचारमा जनाइ’एको छ।
मेको सु’रूदेखि चीनले प’श्चिमदेखि उत्तरत\_र्फ हुने सबै भारतीय ग’स्तीलाई रोकेको टा’इम्स अफ इण्डि’याको भनाइ छ। यस्तै अवस्था ग¥ल्वान र त्यहाँका तातोपानी क्षे’त्रमा रहेको छ। चीनले पनि तिब्ब’तको होता’न, क’स्गर क्षे’त्रको ए’यरवेसमा जे-११ र जे-९ फा’इटर वि’मान र ला’मो दु’रीसम्म बम प्र’हार गर्नसक्ने हति’यारहरूको तै’नाथी बढाएको श्रो’तको दा’बी छ।
भारतले आफ्नो अग्र’मोर्चामा सु’कोइ-३०एमकेआइ, मिग-२९ र ज’गुवार ल’डाकु वि’मानलाई चीन नजिकका एय’रवेसमा लगेको छ। सो क्षे’त्रमा हुन’सक्ने सम्भा’वित भिड’न्तको अध्य’यन गर्न भार’तीय वायुसे’नाका प्रमु’ख मा’र्सल आर के एस भ’दौरियाले बुधबार र बिहीबार ले’ह र श्री’नगर क्षे’त्रको भ्रम’ण गरेको टा’इम्स अफ इ’ण्डियाले आफ्नो समा’चारमा उ’ल्लेख गरेको छ।
भारतीय वा’युसे’नाले चीनसँगको उ’त्तरी सी’मा नजिकै पर्ने लेह, श्रीन’गर, अव’न्तिपुर, ब’रेली, तजपुर, चउबा र जा’सीमारा लगा’यतका सबै एय’रवेसमा सै’निक सक्रि’यता बढाएको छ। ति’ब्बतमा चीनको ८ वटा मुख्य एय’रवेस छन्। यसैगरी टा’इम्स अफ इण्डि’याले भारत आफ्ना पछिल्लो नीति’बाट पछि हटेको र चीनलाई जस्तो’सुकै ज’वाफ फ’र्काउन दृ’ढ रहेको जनाएको छ।
Previous गोर्खा भर्ती खा,रेज गर्न वि’प्लव समुहको माग (हेर्नुहोस बिज्ञप्ति सहित),,र शेयर गर्नुहोस् !
Next नेता रामचन्द्र पौडेल भन्नुहुन्छ : महाकाली स’न्धिमा कुनै रा’ष्ट्रघा’त भएको छैन…ताली या गा’ली??